Siyaasi Cali Cabdi Awaare oo galabta kasoodagay Airpot-ka Boosaaso+Sawiro – SBC
Siyaasi Cali Cabdi Awaare oo galabta kasoodagay Airpot-ka Boosaaso+Sawiro
Waxaa siyaasiga halkaasi kusoo dhaweeyay dadweyne aad utiro badan oo kamida kuwa ku dhaqan magaalada Boosaaso.
Cali Cabdi Awaare ayaa in muda ah dalka uga maqanaa safaro kaladuwan oo xambaarsanaa hadafyo kaladuwan oo ay ugu weyn tahay helida kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha, iyo arimo ku aadan siyaasadiisa
Dalalkii usocdaalada kala duwan kusoo maraya ayaa waxa ay ka mid ahaa wadamo ku yaala Qaarada Yurub iyo sidookale dalal ka tirsan qaarada Africa, sida Sambia Jabuuti Ethibia iyo qaarkale .
Madashii lagu soo dhaweyay oo ahayd garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ayuu kula hadlay saxaafada, wuxuuna Mudane Cali Cabdi Awaare ugu war bixiyey socdaaladiisii uu dalka dibadiisa uga maqanaa, wuxuuna siwanaagsan ugu mahad celiyey shacabweynihii soo dhaweynta u sameyay intii uu socdaalkiisa kujiray .
Siyaasiga ayaa waxa uu kahadlay xaalada Puntland, wuxuuna siweyn usoo dhaweyay gudiyada dorashoyinka Puntland oo dhawaan uu magacaabay madaxweynaha puntland, isagoona ku nuux nuuxsaday in ay arintaasi noqondoonto mid siweyn wax uga bedesa dalka .
Kasokow Cali Cabdi Awaare inuu yahay siyaasi xilal badana kasoo qabtay Dawlada Puntland hadana waa mulkiilaha hay’da waraabinta Somaliyeed ee SBC oo ah idaacadii ugu horaysay oo FM Ah oo laga hirgaliyo deeganada Puntland.
Mudane Awaare iyo Maareeyaha Garoonka Diyaaradaha Boosaaso
Awaare Oo Salaan ku boobaya Saxafiyiintii Soo dhaweysay